Sawirada Todobaadkii tagay iyo Afrika - BBC Somali
Sawirada Todobaadkii tagay iyo Afrika
Qaar ka mid ah sawirada Todobaadkii tagay Afrika laga qaaday
Image caption Dumar Soomaali ah oo ku dabaaldegayay Muqdisho, Khamiistii, waxay ku faraxsan yihiin in Maxamed Cabdullahi Farmaajo loo doortay Madaxweynaha dalka.
Image caption Shacabka caasimadda ayaa xittaa ku dabaaldegayay gawaarida ciidamada. Dhallinyaro badan ayaa isugu soo baxay magaalada.
Image caption Xulka qaran ee la loodin waayay ee Kameruun ayaa ku guuleystay koobka qaramada Afrika Axaddii. Kuwan oo ah taageerayaashooda ayaa ku sugnaa garoonkii ay kula ciyaareen Masar oo ku yaalla caasimadda Gabon ee Libreville...
Image caption Fanaanad u dhalatay dalka Mali, Rokia Traore waxay ka mid ahaa dadkii caanka ahaa kaa ka qeybgalay gebagebada tartankii Qaramada Afrika.
Image caption Halkan waa dalka Koofur Afrika, ninkan wuxuu buufinayaa shinni buux dhaafisay garoon ay ka dheceysay ciyaar kirikit ah. Shinnida ayaa sababtay in ciyaarta ay waqtigeeda ku billaaban wayso. Waxay u dhexeysay South Afrika iyo Sri Lanka.
Image caption Ni naafo ah oo u socda inuu ka qeybgalo isu soo bax Isniintii lagu taageerayay madaxweynaha Nigeria, Muhammadu Buhari, - Waxay ahayd maalintii uu madaxweynaha baarlamaanka ka codsaday inay u kordhiyaan fasaxa caafimaadka ee UK uu ku joogo.
Image caption Talaadadii, Gabar Kenya u dhalatay Sabrina Simader oo ka qeybgaleysay tartanka barafka caalamka ee lagu qabtay Swiss.
Image caption Talaadadii aanu soo dhaafnay, Gabar yar oo ku nool isku raranka Kenya ee Kibera oo ilaalineysa tukaan kabolagu iibiyo ayadoo ardey iskuul ka timi oo ku dul socda qadka tareenka.
Image caption Ardey qaxooti ah oo ka soo qaxay rabshadaha gobolka Darfur ee Sudan oo fasalka dhex fadhiya buugaagna si wada jir ah u aqrisanaya.
Image caption Arbacadii, Ciidamada Taliyaaniga oo Salaan sharaf u saaray madaxweynaha Tunisiya, Beji Caid Essebsi oo Roma kula kulmay Ra'iisul wasaaraha Taliyaaniga Paolo Gentiloni.
Image caption Isniintii, qaar ka mid ah ciidamada Tunisiya ayaa isu diyaarinayay maamuus sanadkii Afaraad loo sameeyay siyaasi hore oo mucaarad ah oo lagu dilay dalkaa oo lagu magacaabay Chokri Belaid.
Image caption Madaxweynaha Koonfur Afrika, Jacob Zuma oo u muuqda inuu og yahay waxa kaga horeeya baarlamaanka. wuxuu salaan sharaf ka gudoomay ciidamada oo ku soo dhaweeyay xarunta baarlamaanka oo shacabka uu uga khudbeeyay.
Image caption Ciidamo dheeraad ah ayaa la geeyay xarunta baarlamaanka, militari ayaa ka mid ahaa. labadan askeri waxay saaran yihiin dhismaha dushiisa si ay xaaladda kor ugala socdaan.
Image caption Dibadda kore ee dhismaha baarlamaanka Koonfur Afrika waxaa ku sugnaa dibad baxayaal mucaaradka iyo dowladda kala taageersanaa. gabadhan waxay iska qaadeysaa sawir.
Image caption Dibad baxayaasha waxaa ka mid ahaa ardey, sidan ninkan dhallinyarada ah, oo booliska ay ka kala ceyriyeen dibadda kore ee xarunta baarlamaanka.
Lahaanshaha sawirka Sammy Awami/BBC
Image caption Ugu dambeyn, Khamiistii Zanzibar waxaa ka bilowday munaasabad loo garanaayo Sauti za Busara, halkaas o farshaxaniin caalamka ka kala socda ay waxyaabo kala duwan ku soo bandhigayaan. Labadan nin waxay lugaha ku xirteen ulo oo ay ku socdaan